Ideas de paleta de colores Ukwazisa ngePalette yombala
Ukwazisa ngePalette yombala
Imibala engenabala kaRute Palette wasebenzisa ubuchule
Ngokubanzi, ipepile inxulunyaniswa nobulumko, ubuchule bokuzimela, inkululeko, umlingo kunye nemfihlakalo. Ukuba nengubo emfusa phantsi kolawulo lwethu (lobugcisa) kubonakala ngathi kwakunzima. Iingcebiso eziluhlaza kwezempilo kunye nemali, kunye nobubomvu zibonisa ubulumko, ubukhosi kunye nentlonipho. Imfusa yam ayingombala wakho omfusa. Ngenxa yokuba umbala omfusa wenziwe ngokudibanisa imibala eshushu efudumeleyo nebandayo, igcina zombini iipropathi. Umbala onsomi unqabile ukwenzeka kwindalo kwaye, ngenxa yoko, uhlala uthathwa njengentsingiselo engcwele. Umbala we-purple wesibini (ofumaneka phakathi kokubomvu kunye nohlaza okwesibhakabhaka kwivili lombala) kunye nemithunzi yegreyini iyanyibilika zombini umbala ohlaza okwesibhakabhaka kunye nobushushu bokuqala obushushu kunye.
Iinketho eziphezulu zemibala yePalette
Nje ukuba usete imibala, kwaye abantu bazi malunga nophawu lwakho, unomdla wokukhumbula loo mibala. Uninzi lwabantu lungathi iblowu ngumbala abawuthandayo. Kuba ngumbala owuthandayo wabantu abaninzi, ungabhenela kwangoko kubaphulaphuli abaninzi. Imibala ekhanyayo ilungele imvelaphi enombala omnyama kakhulu wesicatshulwa uqobo. Ilungile kwimibala ye-aksenti, ukubiza inyathelo, okanye naphi na apho bafuna ukufumana khona abantu. Ekugqibeleni, bayila imibala yezandi ezibonakala ngathi ayinamdla kangako.
Iphalethi yombala -Ibali
Ungayikhetha njani umbala ofanelekileyo wesicelo sakho Ukuba ukhetha umbala ofanelekileyo wesicelo sakho Chonga imbonakalo yabaphulaphuli Nangona eminye imibala inentsingiselo yendalo iphela, imibala emininzi ineembono ezahlukeneyo zasekhaya. Imibala yesicelo kufuneka inxibelelane nomxholo wesicelo kunye nenjongo. Umbala ongaqondakaliyo kwisicelo sakho unokukhokelela kwiziphumo ezibi.
Ungaqala njani ngePalette yombala?
Abantu babona umbala kwindawo yokuqala, ke yonke enye into iphambili. Ngokuqinisekileyo, ufuna ukukhetha imibala oyithandayo. Umbala unembonakalo evele ngaphakathi eyenza eyakho indalo kwindalo ikhule kangaka. Imibala ethile inokutshintsha imeko yethu, okanye ichaphazele imeko yethu yomzimba. Umbala ogqibeleleyo kunye nefilosofi iya kuba sisixhobo sokuzithengisa kwisicelo sakho.
Imbali ye-Palette yombala oHlaziyiweyo
Xa iindwendwe ezitsha zifika emhlabeni kwibhlog yakho, izinto zokuqala ezizicacisayo yimibala. Sebenzisa umbala ukwenza amandla kwigumbi, indlu okanye isakhiwo seofisi yindlela elula yokuphucula amandla kwindawo yakho ngakumbi kuwe. Isetyenziswe ngononophelo imitha ebhencisa umhlaba ngabom. Imibala ye icon yesicelo kufuneka ivakalise ukusetyenziswa kwesixhobo ngokuvakalayo kunye nangokucacileyo.
Ungayikhetha njani umbala wePalette
Ukuhlaziya ipenki yakho yombala wekhitshi akufuneki ukuba ube neendleko ezibanzi. Iphalethi yombala sisiseko sokukhetha imibala emi-2 okanye emi-3 enokusetyenziswa kuyo yonke indawo uphawu lwakho. Iphalethi yethu yemibala inikezela umanyano ngaphambili kuyo yonke imidiya, kubandakanya izinto eziprintiweyo, izinto zentengiso kunye neendawo ezikwi-Intanethi. Kuya kufuneka uchaze iphalethi yombala wakho kunye nemida eya kwimithathu. UMBONO WEPHONDO imibala ye-PONDTTESA yombala inkxaso ivunyelwe ngokusetyenziswa okulinganiselweyo.
Okulandelayo, ndiza kukuchaza iindlela oza kuzisebenzisa ukuze ukhethe umbala wombala ngokulandelayo:
1. Cofa u-Khetha “Khetha umfanekiso wakho”, emva koko ukhethe umfanekiso ofuna ukwazi ikhowudi yemibala kunye nomthwalo wakhe.
Bhala igama lomfanekiso kwikholamu engenanto, emva kokuba “Faka igama lomfanekiso”
3. Emva koko cofa u “Thumela”
Emva koko, ukulandelelana kwemibala ebalaseleyo, imizekelo yemibala, imibala ye-hexadecimal, imibala ye-RGB kunye namagama emibala agqibezele kwitafile.
Njani?? Kulula, akunjalo?
Zama ukufaka imifanekiso emininzi njengoko unayo. Kwaye jonga iziphumo zokudibanisa imibala eziveliswe kwitafile. Umfanekiso owukhuphele uza kubonisa yonke imibala ebalaseleyo, umbala we-hexadecimal, umbala we-RGB kunye negama lombala.
Esta "Ukwazisa ngePalette yombala" el gráfico tiene 20 colores dominados, que incluyen . Hace una combinación de colores tan hermosa inspirada en esta imagen.